အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ BlackBerry Priv ၏စျေးနှုန်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၉၉ ဖြင့်အတည်ပြုသည်
Hace unos días os comentamos la posibilidad de que el precio de la BlackBerry Priv en España rondase los 799 euros. Una cifra excesiva, más si tenemos en cuenta que es el primer dispositivo Android နှင့် BlackBerry y que el fabricante necesita de manera urgente entrar en el mercado.
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? ¿Creéis que BlackBerry triunfará en el mercado pese al precio del BlackBerry Priv?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ BlackBerry Priv ၏စျေးနှုန်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၉၉ ဖြင့်အတည်ပြုသည်
Juan Sinmiedo ဟုသူကပြောသည်
Jose Ávila ဟုသူကပြောသည်
Fallen နှင့်ကစားသည့် pinball ဂိမ်းအတွက်ဂီတကိုအေးဆေးပါ
AnTuTu ၏ပြောကြားချက်အရ Meizu Pro5သည်စျေးကွက်အတွင်းတွင်အင်အားအကြီးဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်